Izindaba - Yiziphi izimboni imishini yokusebenza kweshell sheet sheet esetshenziswa kakhulu, futhi yiziphi izidingo ezithile?
Ukusebenza kwensimbi kwensimbi yegobolondo ikakhulu kubhekisa ekuqhubekeni phambili kwamapuleti ashubile ezempi, futhi kungadlala indima enhle kakhulu kule nqubo. Ngoba izingxenye zayo ezicutshunguliwe zinolwazi oluncane, ngakho-ke emkhakheni wonke Ibuye yaheha ukunakwa kwabantu abaningi, ngakho-ke enqubeni yokucubungula, kufanele siziqonde lezi zimo kusengaphambili lapho izimboni zisetshenziswa kakhulu khona.
Ukuthuthuka okuqhubekayo komkhakha wezokuxhumana we-elektroniki eminyakeni yamuva kuzodinga nezidingo ezengeziwe zokucubungula kuzo zonke izici, futhi ngasikhathi sinye kuzoba okuqondile kakhulu, ngoba imikhiqizo esetshenziswayo icubungula ingahlangabezana nezidingo eziphakeme. Ukuthuthukiswa komkhakha Futhi kubhekene nomthelela omkhulu, iningi lezinkampani ezaziwayo zasekhaya nezangaphandle zingaba nesidingo salezi zici, ngakho-ke izici zobuchwepheshe zizobaluleke kakhulu.
Ukuthuthukiswa komkhakha wekheshi
Lapho usebenzisa ukucutshungulwa kwensimbi kwegobolondo lemishini, uzothola nokuthi izingxenye eziningi embonini yekheshi nazo zinembile kakhulu. Ngesikhathi senqubo yokufaka isicelo, kunezinhlobo eziningi zezingxenye, futhi bonke abakhiqizi abakhulu bazoba nabaphakeli abaningi abazenzela futhi bazisabalalise, ngakho-ke kufanele sinake lezi zimo ezithile ngesikhathi, futhi sikwazi ukwazi ushintsho oluthile kulo lonke umkhakha. Lokhu kuzoba nomphumela omuhle kithina sonke. Isetshenziswa emikhakheni eminingi ehlukene, ngakho-ke kufanele kukhethwe ngokufanele.